ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » မေတ္တာတော်၌7လြယ္ကူလုပ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်သောကမ္ဘာ့အများဆုံးမှော်ခံစားချက်တွေကိုတစ်ခုဖြစ်တယ်. စင်ကြယ်သောချမ်းသာကိုနှင့်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ပြည့်စုံ, ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်းသင်သည်တစုံတခုကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါကကဲ့သို့သင်ခံစားရစေတယ်. ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချစ်မိတဲ့အခါ, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတွေ့ကြုံဆက်ဆံရေး၏စိတ်ရင်းနှင့်ရင်းနှီး၏အစစ်အမှန်အထောက်အထားဖြစ်သည်. မေတ္တာကိုရှုပ်ထွေးနေချိန်တွင်, ကျွန်တော်သည်အဘယ်သို့မေတ္တာကိုကွပ်ထားတဲ့နှင့်မည်သို့အတွက်တည်မြဲတဲ့မေတ္တာကိုအောင်မြင်ရန်ပါပြီအောက်တွင်7လွယ်ကူသောအဆင့်များ.
လှမ်း #1: ၏ The One
သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုတွေ့ရရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်. ထိုအချိန်ကာလ၏အများစုဟာ, သင်သည်သင်၏အခြားတစ်ဝက်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းအခါသင်ချက်ချင်းသိ, သင့်ရဲ့နှစ်ဦးတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအဘို့အချိတ်ဆက်နဲ့အစဉ်အမြဲသင့်ကိုသူတို့သိရကြပြီဆိုရင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်. သင်သည်ဤတွေ့ကြပြီဟုလာတဲ့အခါ, သာအကောင်းဘက်ကအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အတွက်အပြစ်အနာအဆာရှာနေသာစိတ်ဆင်းရဲမှဦးဆောင်မည်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များနှင့်ပြန်လာအတွက်ကဏ္ဍတိုင်းတွင်ပွေ့ဖက်ဖို့သင်ယူ, သင်သည်ထာဝရသစ္စာရှိမှုနှင့်မေတ္တာကိုရရှိလိမ့်မည်ဟု.
လှမ်း #2: သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေး
မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်ကသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကသင့်လက်တွဲဖော်များနှင့်ဟန်ချက်ညီညီဖြစ်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်. ထိုအချိန်ကာလအများစုမှာ အကယ်. တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကွဲပြားခြားနားကြသောအခါအချို့အခြေအနေနှင့်အချိန်ရှိလိမ့်မည်. ဒါဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များအားလုံးတွေ့ကြကြောင်းသေချာစေဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့ရှူးဖိနပ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းထားရန်အရေးကြီးပါသည်.
လှမ်း #3: သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နားထောင်ပါ
သင်ချစ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်နားထောင်ခြင်းတို့သည်မိမိတို့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မည်သို့မည်ပုံအပြင်၌နေသောသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချိတ်ဆက်ပြီးခံစားရန်အထောက်အကူပြုမည်, သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရုန်းကန်မှုများတွင်ရှိသည့်နေရာကိုနားလည်ဖို့, လိုအပ်ချက်ကိုကာလ၌သူတို့ကိုထောက်ခံပါ, နှင့်ကူညီသူတို့ကိုပြုံးစေတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိ. လူသားတွေအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်နားထောင်ရခိုင်သင်၏မေတ္တာကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်သင်ယူခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာကြသည်.
လှမ်း #4: သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးထားလာစေရန်
ရိုးသားစွာဖြင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သူတို့သည်သင်နှောင်ကြိုးခိုင်ခံ့စေတော်မူမည်ကိုကူညီဘူးသောအရာတို့သည်အပြုသဘောအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်အကောင်းသောအရာတို့ကိုဘယ်လိုထောက်ကူ. ကောင်းမကောင်းကိုအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေသူကပိုမိုလွယ်ကူအခြားအရာများကိုသွားကြကုန်အံ့စေသည်, သဘောထားကွဲလွဲမှု၏အာရုံထွေပြားလျစ်လျူရှု, နှင့်သင့်မိတ်ဖက်မျှော်လင့်ချက်များနေထိုင်ခြင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလက်ခံရန်.
လှမ်း #5: သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နဲ့အချိန်ဖြုန်း
အတူတကွသုံးဖြုန်းဖို့အချိန်အတွက်ပြင်ဆင်နေစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်စိုက်ပျိုးရန်အလွန်အရေးပါသည်. အတူတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အကြံအစည်မျှဝေဖို့ပါလိမ့်မယ်, ခံစားချက်များ, နှင့်ပြဿနာများ. ဒီ shared အချိန်နှင့်အတူ, သင့်ရဲ့နှောင်ကြိုးတစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအပြင်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းဖွဲ့စည်းစေမည်. အကယ်စင်စစ်ထာဝရမေတ္တာဖို့အဓိကသော့ချက်မိတ်ဆွေတွေရဲ့အလွန်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်.
လှမ်း #6: သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကြင်နာဖြစ်
သင်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကပြော. ကရုဏာတရားရှားပါးသေးထိထိရောက်ရောက်ရင်ခုန်စရာလက္ခဏာများဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်မျိုးကိုဖြစ်အားနည်းချက်ကြာနေချိန်တွင်, ကြင်နာမှုကိုပျိုးထောင်နေစဉ်ဆိုလိုနောက်ဆုံးမှာဖက်စပ်မှာသွားစားသည်.
လှမ်း #7: အသက်ရှင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲကျစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, ထိုသို့စိတ်အားထက်သန်နဲ့အရှိန်ရင်းနှီးကဲ့သို့တူညီသောမဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်. မေတ္တာသည်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အလုပ်ကြာ, နှင့်မေတ္တာသည်ခိုင်ခံ့စေသည်များစွာကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်တို့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်. သို့သော်မေတ္တာကအစိုင်အခဲအဆင့်သို့ရောက်ရှိတစ်ချိန်က, ဒါကြောင့်အထူပါးလွှာသောအားဖြင့်ထောက်ခံမှုယိမ်းမယိုင်ဖြစ်လာ, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ကျိုးပဲ့ရဘယ်တော့မှမနိုင်စေတဲ့ connection တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.